Maxkamadda Ciidamada qalabka sida oo dib u dhigtay xukunka…
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ayaa maanta dhageysatay dacwad loo heysto Askari katirsan Ciidamada Booliiska Soomaaliya oo 24-kii April kuna beegneed Kowdii Bisha Ramadaan degmada Boondheere ku dilay labo ruux oo shacab ah.
Dable Booliis Xasan Aadan Xasan waxa uu katirsanaa Saldhigga Booliiska Degmada Boondheere, meel aan sidaas uga fogeyn Isgoyska Jubba ayuu ku dilay Marxuumiinta kala ah Xasan Cali Cadaawe iyo Madiina Cabdullaahi Cabdi.
Taliyihii Booliiska Degmada Boondheere ayaa gacanta ku dhigay Askariga oo ku simay Taliska Booliiska Soomaaliyeed sida uu xiligaas Caddeeyay Taliye Cabdi Xasan Xijaar oo Warbaahinta la hadlay.
Xeer ilaalinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ayaa dacwad dil bareer ah ku oogtay Dable Boolis Xasan Aadan Xasan, waxaana ka difaacay eedeyntaas Qareenada u doodayaya oo ku joogay fadhiga Maxkamadeyntiisa.
Waxaa lasoo bandhigay caddeymo ku saabsan Sawirrada laga qaaday labada Marxuum ee u dhimatay Xabad uu riday Askariga, goobta ay ku sugnaayeen iyo sida ay wax u bililiqeysteen oo ay xog uruurin ku sameeyeen.
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1-aad ee CQS Xasan Cali Nuur Shuute oo soo xiray fadhiga Maxkamadda kadib dhageysiga Qareenada iyo Xeer ilaalinta waxa uu madasha ka sheegay in dib laga shaacin doono go’aanka xukun ee ku dhacay Dable Booliis Xasan Aadan Xasan.